राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आजिबन नरहने घोषणा गर्दै रवी लामिछानेका दाजुको आयो कडा स्टाटस « Post Khabar
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आजिबन नरहने घोषणा गर्दै रवी लामिछानेका दाजुको आयो कडा स्टाटस
प्रकाशित मिति: ७ असार २०७९, मंगलवार १६:२४
७ असार, काठमाडौं । पूर्वसञ्चारकर्मी रवी लामिछानेले आज ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नामक राजनीतिक दल घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित घोषणा सभामा उनले सो पार्टीको घोषणा गरेका हुन । लामिछानेले पार्टी घोषणा गरेपछी उनका दाजु हरिशरण लामिछानेले सो पार्टिमा आजिबन नबस्ने घोषणा गरेका छन .
सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले सो घोषणा गरेका हुन ।
रवी लामिछनेको दाजुको स्टाटस
नैतिक न राजनैतिक???
नया पार्टी घोषणा गरेकोमा रबि लामिछानेलाई बधाई । पार्टीको नीति अनुसार, परिवारबाद निषेध गरिनु राम्रो प्रयास हो। यस क्रममा मनमा लागेको एउटा रोचक कुरा:
कुनै पनि नया सदस्यले अब देशभर आफ्नो जन्मकुन्डली लाई अर्को सदस्यसङ्ग भिडाइ नाता “अप्रमाणित” भएको प्रमाणपत्र लिएर मात्र पार्टी प्रबेश गर्नु होला। पछि आपसी मायाप्रेममा परि बिहेबारी भै कुनै अवस्थामा नाता प्रमाणित भएमा सदस्यता खारेज हुन सक्छ है।
“लामिछाने” बन्धुहरु सरसल्लाह गर्नुहोल।
दर्ता हुन बाकी सो पार्टीका कुनै पनि गतिबिधीमा म परिवारको नातेदारको नाताले नैतिक रुपले सम्लग्न हुने त कुरै भएन। राजनैतिक रुपले त्यो पार्टिमा म आजिबन रहने छैन भन्ने जानकारी पनि गराउदछु। स्वतन्त्र र दलगत राजनितिका लागि म सङ्ग अपार अवसर र सम्भाबना छन। बाकी कुरामा comment गर्ने मेरो हैसियत छैन। नेपाल आमाको एक स्वतन्त्र नागरिकको नाताले मेरो जीवन देशको सेवामा हमेसा समर्पित रहने छ। स्वतन्त्र हुन स्वतन्त्र पर्टी किन चाहियो ????